Ịgụ Oge: 3 nkeji Oge ụfọdụ okwu ọgba aghara nwere nkọwa na-adịghị mma. Ekwetaghị m na ahịa dijitalụ taa na-emebi ọgbara ọhụrụ ọ bụla, ekwenyere m na ọ na-emewanyewanye ya. Ndị na-ere ahịa na-agbanwe ma nabata teknụzụ ọhụụ na-enwe ike ịhazi, itinye aka, ma jikọọ na atụmanya ha na ndị ahịa n'ọtụtụ ụzọ bara uru karị. Oge ogbe na mgbawa na-agbanwe n'azụ anyị ka sistemụ dị mma na ịche na ịkọ omume nke ndị ahịa na azụmaahịa.
Ịgụ Oge: 2 nkeji Ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ ejikọrọ na inntanetị na ụlọ m na ọfịs na-eto kwa ọnwa ọ bụla. Ihe niile anyị nwere ugbu a nwere ebumnuche pụtara ìhè - dị ka njikwa ọkụ, iwu olu, na thermostat mmemme. Agbanyeghị, njigide nke teknụzụ na-aga n'ihu na njikọta ha na-eweta ọgba aghara azụmahịa dịka anyị ahụtụbeghị mbụ. Na nso nso a, ezigara m otu ofntanetị nke Ihe: Digitize or Die: Gbanwee nzukọ gị. Nabata
Ịgụ Oge: 2 nkeji Anyị na-ekerịta ụfọdụ ihe atụ na nso nso a banyere etu Enterprise IoT (Intanet nke Ihe) nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu nke ire ahịa ụlọ ahịa na-ere ahịa. Nwa m nwoke nọ na-ekerịta akụkọ akụkọ na m na-ere ahịa nke gosipụtara ụfọdụ ọnụ ọgụgụ jọgburu onwe ya banyere mmalite na mmechi nke ụlọ ahịa mkpọsa. Ọ bụ ezie na ọdịiche nke mmechi ahụ na-abawanye, ọ dị mkpa ịghọta na mba a na-aga n'ihu ịmepe ọtụtụ ụlọ ahịa na-ere ahịa. Ọbụna Amazon, nke a na-akpọ mkpọsa
Ịgụ Oge: 2 nkeji Ndị na-agbazinye ego na-akwado ịkwado ụlọ ọrụ na-ere ahịa ugbua. Bloomberg na-ebu amụma amụma ahịa ahịa nwere ike ịbịakwute anyị ngwa ngwa. Lọ ahịa mkpọsa na-agụ agụụ maka ihe ọhụrụ, na andntanetị nke Ihe nwere ike inye mmụba dị mkpa. N'ezie, 72% nke ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ ugbu a na Enterprise Internet of Things (EIoT). Ọkara ndị na-ere ahịa niile etinyelarị teknụzụ dị nso na azụmaahịa ha. Gịnị bụ EIoT? N'ime ụlọ ọrụ taa, ịba ụba